developer account မပါဘဲ OS X El Capitan ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း ငါက Mac ပါ
developer account မပါပဲ OS X El Capitan ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Jordi Gimenez | | Mac OS X ကို, OS X ကိုအယ်လ် Capitan, လဲ tutorial
ကျွန်ုပ်ထံသို့လာမည့်မေးခွန်းများအနက်တစ်ခုမှာ OS X El Capitan beta 1 ကိုအဓိကလည်ပတ်ရေးစနစ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်၏အဖြေမှာပုံမှန်ဖြစ်သည်၊ တရားဝင်ဗားရှင်းကိုစောင့်ဖို့အကောင်းဆုံး။ ဟုတ်ကဲ့၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့ OS X El Capitan beta ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင် developer မပါဘဲမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုလေ့လာရန်သွားပါမည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်မှာသင် Mac နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဤ operating system ကိုမတပ်ဆင်ပါနှင့်။ သငျသညျရှာတှေ့နိုငျဖြစ်နိုင်သောသဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်အဓိကတစ်ခုအဖြစ်အသစ်တစ်ခု partition ကိုဖန်တီးသို့မဟုတ်ကကြာရှည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေကြောင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်စတင်ဖွင့်ဖို့စောင့်ဆိုင်း။
OS X El Capitan ကိုတပ်ဆင်လိုသည့်တရားဝင်မူကွဲကိုစောင့်ဆိုင်းရန်ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးထောက်ခံချက်နှင့်ပင်လျှင်၊ အကျွမ်းတ ၀ င်ဟောင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံး။ DiskMakerx နှင့် 8GB USB သည် Mac OS Plus သို့ Foraged (မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း)။ ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကိုအရန်ကူးသိမ်းဆည်းပါအချိန်စက်နှင့်ဖြစ်စေ၊ နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြaနာတစ်ခုရှိလျှင်လုံခြုံရေးအရန်သင့်သိမ်းဆည်းထားမည်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ OS X El Capitan ကို download လုပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive တွင်အခန်းကန့်တစ်ခုဖန်တီးပါသို့မဟုတ်ပြင်ပတစ်ခုကိုသုံးပါ တပ်ဆင်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်။ အခုအရင်တုန်းကတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ဒီကြီးကျယ်တဲ့ကိရိယာနဲ့အတူပုံမှန် tutorial ကိုလိုက်နာရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။
3 OS X El Capitan beta ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
အဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းစွာ installer ကိုဖန်တီးပါ။
Mac နဲ့ဆက်သွယ်တယ် USB သို့မဟုတ် 8GB SD ကဒ် installation နှင့်အတူဆက်လက်ရန်။ ဒီ USB / SD ကိုအမြဲတမ်းဖျက်ပစ်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ပြlaterနာတွေကိုနောက်မှရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အချည်းနှီးပဲ။ ကျနော်တို့ DiskMaker စတင်ပါ y option ကိုနှိပ်ပါ OS X Yosemite ကိုထည့်ပါ (အကယ်၍ ၎င်းသည် El Capitan ဖြစ်သော်လည်း DiskMakerx တွင်မတွေ့ပါက) အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကို applications ဖိုင်တွဲတွင်သို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို download လုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင် administrator password တောင်းပါလိမ့်မည်။ နှင့် ဆက်လက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးရန်စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အနည်းငယ်တိတ်ဆိတ်စွာနေလျှင်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်ကိုမည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုပိတ်ထားပါက USB / SD ကို ဆက်သွယ်၍ မပြီးမှီကွန်ပျူတာကိုပိတ်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ငါတို့စတင်နိုင်ပါသည်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ပေါ်တွင် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကို.
OS X El Capitan beta ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
ယခု USB ကို Mac နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကိုပိတ်လိုက်သည် ချိတ်ဆက် USB / SD ကအတူ။ ငါတို့စက်ကို restart လုပ်တယ် Alt key ကိုနှိပ်ပါ start menu ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ USB မှတ်ဉာဏ်, disk ကိုသို့မဟုတ် SD ကဒ်ကိုရွေးပါ ကျွန်ုပ်တို့ OS X El Capitan ထည့်သွင်းသည့်နေရာရှိရာကိုနှိပ်ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်အခန်းကန့် (သို့) disk ပေါ်ရှိ installation လုပ်ခြင်းအဆင့်များကိုလိုက်နာရုံသာမက OS X El Capian ကိုညွှန်ပြသောအဆင့်များဖြင့်စတင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » developer account မပါပဲ OS X El Capitan ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
OSX El Capitan ကိုမည်သည့်နေရာမှ download လုပ်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Parallels တွင် virtual machine တစ်ခု ဖန်တီး၍ ၎င်းကိုထည့်ရန်ဖြစ်သည်။
ခရစ်စတီယာန်  (@ccontreras) ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ သင်သည် OSX El Capitan အသစ်၏ beta ကိုစမ်းသပ်လိုပါကအသုံးပြုထားသော disk သို့ partition တစ်ခုလုပ်ပါ၊ သို့မဟုတ်အခြား disk တစ်ခုတွင်ပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းကိုပင်မ disk သို့ update လုပ်ရန်အသုံးမပြုပါနှင့်။ iCloud account ဖြစ်စေ .. this ဖြစ်သောကြောင့်အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို၎င်းတို့သည် iOS9 နှင့် Mac OS 10.11 အတွက်သာရရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ယခုသင်ဤအရာများကို update လုပ်ပါကသင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကို မူတည်၍ Yosemite သို့မဟုတ် Mavericks တွင် အသုံးပြု၍ မရတော့ပေ။ ဥပမာ .. မှတ်စုများသည် iOS9 တွင်သတိပေးမှုတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ရမည့်အရာများဖြစ်သည်။
iCloud Drive နှင့်ဆင်တူသည်။ ယခု Yosemite အတွက်သာရနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအခြား OSX အားလုံးနှင့်အသုံးမပြုမီ - အကယ်၍ သင်မွမ်းမံပါက Mavericks နှင့်အစောပိုင်းက macs များတွင်အသုံးမပြုတော့ပါ။
Cristian  (@ccontreras) ကိုစာပြန်ပါ
Johnny Palazuelos ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် OS X El Capitan ကို scratch မှ install လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် Apple ID ကိုတောင်းခံသည့်တပ်ဆင်ခြင်းကိုစတင်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်ထည့်လိုက်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုဘယ်တော့မှအသိအမှတ်မပြုပါ။ အခြားကွန်ပျူတာတစ်ခုမှဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ငါအင်တာနက်မပါဘဲထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါ့ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သွားမယ့်အရာကိုမဆိုစိတ်ကူး ??? ကူညီပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Jonny Palazuelos အားပြန်ပြောပါ
ဟိုင်းဂျွန်နီ၊ မင်းမှာ developer account ရှိလား။ မရရှိလျှင်၊ Apple ID ကိုသင်လုံးဝမလိုအပ်ပါ။ Mac administrator စကားဝှက်လိုအပ်ပါသည်။
အဲရစ် navarro ဟုသူကပြောသည်
ငါတပ်ဆင်ပြီးခါနီးပြီ၊ ၀ င်းဒိုးဖြူလာပြီး "back" နှင့် "forward" ဆိုတဲ့ options တွေပေါ်လာတယ်။ ရှေ့ကိုနှိပ်ပါ။ ဘာမှမဖြစ်၊ ဘာလုပ်နိုင်လဲ။
Erick Navarro အားပြန်ပြောပါ
သင်ထည့်သွင်းလိုက်သော OS X တွင်အမှားအယွင်းများရှိနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကိုခြစ်ရာကနေနှင့်အခြား installer တစ်ခုဖြင့်စတင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်မှာကြီးမားတဲ့ပြproblemနာရှိနေတယ်။ ခြေလှမ်းအားလုံးကိုလှမ်းပြီး Mac ကိုပုံစံချခဲ့တယ်။ ပြီးရင်ပြန်ဖွင့်ဖို့အချိန်ရောက်ရင် Alt ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ငါ့ 8G USB ပေါ်မှာငါဖန်တီးလိုက်တဲ့ disk ကငါ့ကိုမမှတ်မိတော့ဘူး။ Diskmaker နဲ့အတူ X …ဖြေရှင်းနည်း။
သင်သည် OS X El Capitan ကိုပြန်လည်ကူးယူနိုင်သည်၊ သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်တွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် / သူငယ်ချင်းတစ် ဦး ၏ Mac မှ Mac App Store တွင်ရရှိနိုင်သည့်တရားဝင်ဗားရှင်းမှသို့မဟုတ်ယခုတွင် OSX ကိုအွန်လိုင်းမှ download လုပ်ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
ငါ iOS Capitan ကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူက Apple account ကိုတောင်းခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်အပေါ်မှာထည့်လိုက်တာနဲ့ငါ့ကို install လုပ်လို့မရပါဘူး။ Mac စာအုပ် air ကကျွန်တော်မပါတာကို ၀ ယ်သူကပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ သူတို့အကောင့်ကိုသူတို့မမှတ်မိဘူး၊ operating system ကိုဘယ်လိုငါဖွင့်ရမလဲ။
MacBook အသစ်ဟာဆက်သွယ်မှုမှာပျက်ကွက်တယ်လို့ထင်ပါသလား။ OWC က၎င်း၏အနာဂတ် USB-C dock ကို port 11 ခုနှင့်ကြေငြာသည်။
Apple သည် ၃ လမ်းကူးစီမံကိန်းအတွင်းရှိရုံးခန်းကျယ်များကို Pittsburgh တွင်ငှားရမ်းခဲ့သည်